Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Atrocities In Kachin Land.
at 4/18/2013 03:01:00 AM
Atrocities In Kachin Land အစိုးရ၏လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှ Atrocities In Kachin Land. ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော ဗမာအစိုးရတပ်မတော်၏ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ကချင် လူထုအပေါ်မတရားပြုကျင့်မှူ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် မှူပေါင်းများစွာမှ ကမ္ဘာ့မီဒီယာများတွင်တင်ပြသော မှတ် တမ်းရုပ်သံဗီဒီယိုအချို့။ Click on video link++++
Labels: Refugee, report, video